यी कस्ता श्रीमान! श्रीमतिको टाउको छि नाएर पुगे प्रहरी चौकी र गाए रास्ट्रिय गान ! – PathivaraOnline
Home > अपराध > यी कस्ता श्रीमान! श्रीमतिको टाउको छि नाएर पुगे प्रहरी चौकी र गाए रास्ट्रिय गान !
admin February 3, 2020 अपराध, समाचार, समाज	0
आफ्नी श्रीमतीको टाउको छि नाएर टाउकोसहित पुलिस चौकी पुगेका छन् । उत्तर प्रदेशको बाराबंकी जिल्लाका एक व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीको ह त्या गरेपछि श्रीमतीको टाउकोसहित पुलिस चौकी पुगेका छन् । पुलिस चौकी पुग्नुअघि उनले का टिएको टाउको लिएर पूरा शहर घुमेका थिए । ती व्यक्तिको नाम अखिलेश रावत हो ।
श्रीमतीको टाउको हातमा लिएर पुलिस थाना पुगेका व्यक्तिलाई देखेर सुरुमा पुलिससमेत आत्तिएको समाचारमा जनाइएको छ । स्रोतका अनुसार ती व्यक्ति पुलिस चौकीमा पुगेपछि पुलिसले उनको हातबाट टाउको लिन खोज्दा उनले राष्ट्रगान गाएका थिए त्यसपछि ‘भारत माता की जय’ नारा लगाएका थिए ।
अलास्काका बासिन्दा दाउराको खोजि गर्न गएका थिए । शिशमारेफको २० किलोमिटर पश्चिमतिर अलास्काको समुन्द्री तटमा दाउरा खोजिरहँदा उनले र क्सीको बोतल फेला पारे । बोदलभित्र कुनै वस्तु देखियो । उनमा जिज्ञासा पैदा भयो । सो बोतल प्लास्टिक कर्कले बन्द गरिएको थियो । निकै कठिनाईपूर्वक र क्सीको बोतल खोले ।
रुसी संचारमाध्यमले यो विषयलाई उठाए । क्याप्टेन अनातोली बोटसेन्कोेद्वारा लेखिएको चिट्ठी भनेर संचार माध्यमले पत्ता लगाए । उनले द नोमे अखबारलाइ भने “बोतलको चिट्ठीलै निकाल्न मैले धेरै प्रयास गरे र दात समेत प्रयोग गरे“ “यो भित्रपट्टि सुख्खा थियो र अझै पनि वाइन वा पुरानो म दिराको गन्ध आयो । कागज सुख्खा थियो ।“फेसबुकमा उनको अपीलले अझै सुचित नोटको अनुवाद गर्न प्रेरित गर्यो ।
उनले १९६० मा सुलकको निर्माणको पर्यवेक्षण गरेका थिए र १९७० सम्म यसमा यात्रा गरेका थिए भनेर क्याप्टेन अनातोली बोटसेन्कालाई रिपोर्ट गरियो ।
दुःखद खबर – कलेज पढ्ने हिडेकि दुई रोल्पाली किशोरीका सपना इँटाका भारीमा!